Qaramada Midoobey oo sheegtay in cudurka dabaysha laga ciribtiray Soomaaliya |
Hay’adaha Qaramada midoobay ayaa waxaa ay ku dhawaaqeen in sanadihii 2013-2014 Soomaaliya laga heley cudurka Dabeysha kaas oo saameeyay dad ku dhow 200 oo ruux oo u badan carruur uu ka dhaaday cudurkaasi Soomaaliya.
Cudur sidaha loo yaqaano virus, ayaa ah mid sababi kara curyaanimo ama paralysis xitaa dhimasho, waana mid si dhaqso leh ku fidi karaa, waxaana uu saameeyay 194 ruux sanadkii 2013-ka. Iyadoo Soomaaliya dadka uu cudurkan uu saameeyay ay gaarayaan ilaa 5 ruux sanadkii 2014ka.
Labo kamid ah shaqaalaga hey’adda UNICEF oo ka shaqeynayay la dagaalanka cudurka Dabeesha ayaa ku dhintay qarax ka dhacay Garoowe bishii Abriil.
Shirweynihii sugidda Cuntada, Aafooyinka iyo Isbeddelka Cimilada‏ oo Muqdisho lagu soo gaba gabeeyay
← Wasiirka Arrimaha Gudaha Odowaa oo ka hadlay muuqaal calanka u eg oo lagu arkay shirka Madasha Wadatashiga
Golaha Wasiirada oo magacaabay Guddiga Gurmadka Fatahaadda iyo Roobabka →